Air Pod Apple, Airpod eriri igwe nti, Airpods Bluetooth - Yimi
Ekwentị: +86 18520868593
Portable Bluetooth Ọkà Okwu
N'èzí Bluetooth Ọkà Okwu
Waterproof Bluetooth Ọkà Okwu
Fabric Bluetooth Ọkà Okwu
Ikanam Bluetooth Ọkà Okwu
Nkwado Power Bank
Ebughibu Ike Bank
High Ike Ike Bank
Ikuku Power Bank
TWS eriri igwe nti
N'IHI gịnị Bluetooth ọkà okwu bụ nhọrọ kasị mma maka egwuregwu
Ezubere maka music na-akpali gị
Anyị maara ihe egwuregwu pụtara na ụbọchị ndụ gị -Climbing na ndị ọzọ na egwuregwu nwere ike ịbụ oké ụzọ ka mma gị mma, mma gị na onwe-obi ike na ida ibu ibu. Ma anyị maara na ihe music pụtara, kwa. The music egbochi monotony na curbs n'èzí ndọpụ uche na-ị na-elekwasị anya. N'afọ iri na ụma na fuels gị egwuregwu. Na nke a bụ ya mere na-eke ndị kasị mma wireless ọkà okwu bụ anyị ahuhu.
Anyị chepụta anyị Bluetooth ọkà okwu ka jikota ngagharị na music, n'ihi na ha bụ mma ọnụ. Ndị kasị họọrọ ụdị ndị ọkà okwu na-wireless ọkà okwu nke nwere otutu uru. Gịnị nwere ike mma karịa a ala ọrịrị ma ọ bụ na-agba ọsọ? Nke a bụ ihe ị ga-enwe mgbe e nwere ndị mba Gịnị na wires tangling na ahụ gị. Na ọkacha mmasị gị music ebre, ọrụ gị si na-akawanye ọzọ na-akpali ma na-ufiop. E nwere ọbụna mkpọtụ kagbuo Bluetooth ọkà okwu na-ekwu okwu na i nwere ike na-agbalị na-arị ma ọ bụ na-agba ọsọ.
Ọtụtụ Bluetooth ọkà okwu na-ọbụna kpọmkwem haziri maka mma ojiji, na-etu ọnụ ajirija-proofing, jupụtara na nkume casings, na esịtidem batrị na outlast ọbụna ndị kasị ara arụsi.
BANYERE YIMI Industrial Limited
YIMI Industrial Limited hiwere na 2009 na Shenzhen, China na tumadi na-emepụta kọmputa na ngwaahịa gụnyere Bluetooth ọkà okwu & ike akụ. YIMI agbaso enye elu-edu ngwaahịa na ọrụ maka ndị ahịa dabere na ya ụkpụrụ Premium Quality na ezi uche Price, ka unu wee debe ndị ahịa na-enwe ụkpụrụ omume ada site na anyị na.
Ọtụtụ ngwaahịa na anyị na-emepụta na-mere site anyị R & D otu. Dị iche iche na aghụghọ na nhọrọ na-mepụtara dabeere ahịa mkpa / arịrịọ. Anyị ga-anọgide na-asọ ókè!
Na a ụwa ejupụtakarịkwa na sub-ọkọlọtọ cheaply mere wireless ọkà okwu, anyị na-agba mbọ iji mma. Anyị na-na-arụ ọrụ siri ike ịchọta ụzọ kacha mma na-enye anyị na ndị ahịa na-ego kasị elu ụda & zuru okè stereo ụda na ezi uche ịgbanwe agbanwe agbanwe na-enweghị na-achụ àjà na àgwà nke ọrụ anyị.
Anyị Filiks nyere aka nyefee consistentand elu ọrụ anyị ahịa. Anyị na-anya n'ihi na a ngwọta na-hụ dịghị onye doo emechu ihu.
Anyị ezi nzube ike ngwaahịa na ị ga-n'anya
Dazzle agba Bluetooth ọkà okwu
Ịmepụta a zuru okè ambience chọrọ abụọ mkpa - nri ọkụ na obi ụtọ music.
Anyị Njirimara nke kacha mma ikanam Bluetooth ọkà okwu na ọkụ na ike a 360 Celsius lightshow ma napụta ikenyeneke mbiet ụda àgwà n'otu oge. Ndị a na-ekwu okwu na-onwem na ikanam ọkụ na okirikiri site multiple na agba na anya n'ezie pụtara - ha zuru okè n'ihi na n'èzí ọzọ, nnọkọ na maa ụlọikwuu ebe ndị enyi gị na ndị ezinụlọ pụrụ ige ntị na music na-enwe Ikanam ntem nakwa.
Ọzọkwa , ndị ọkà okwu na-abịa na ike akụ ọrụ na-eme ka ndụ a otutu mfe n'ihi na ị.
Ikanam Display ike akụ 10000mAh
Ebughibu & nkecha imewe na-eso gị n'ebe ọ bụla ị na-aga
Secure kwesịrị ekwesị wuru maka na-eme egwuregwu.
Anapụta nnukwu ụda na tọrọ etinye site na gị toughest arụsi.
Chọrọ na-arụ ọrụ US
Nanchang Mbụ Industrial Area, Gushu Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China
Iphone Power Bank, Mobile Power Bank, Bluetooth Ọkà Okwu Nyocha, Fast Nchaji Power Bank, Bluetooth Ọkà Okwu N'ihi Car, Big Bluetooth okwu,